Bit By Bit - Ịjụ ajụjụ - 3.3.2 mmesho
Mmesho bụ banyere-eme inferences si ihe gị zaghachirinụ asị ihe gị zaghachirinụ chere na ime.
Nke abụọ, Atiya nke ngụkọta e mere na njehie kpuchie bụ mmesho; ọ emekọ otú anyị nwere ike ime ka inferences si azịza na zaghachirinụ-enye anyị ajụjụ. Ọ na-enyo na azịza anyị na-enweta, na Ya mere inferences anyị na-eme, nwere ike ịdabere oké-na na mgbe ụfọdụ ihe ijuanya ụzọ-on kpọmkwem otú anyị na-arịọ. Ikekwe ọ dịghị ihe na-egosi ihe a dị mkpa nke ọma karịa ihe egwuregwu na ihe ndị dị ebube n'akwụkwọ Ịjụ ajụjụ site Norman Bradburn, Seymour Sudman, na Brian Wansink (2004) :
Abụọ nchu-àjà, a Dominican na a Jesuit, na-atụle ma na ọ bụ mmehie na-aṅụ sịga na-ekpe ekpere n'otu oge. Mgbe gwụsịrị iru ná mkpebi, onye ọ bụla gawara ịkpọ ya nwoke ka elu. The Dominican-ekwu, "Gịnị mere gị ka elu-ekwu?"
The Jesuit na-emegharị, "O wee sị na ọ bụ na naa."
"Nke ahụ bụ na-akpa ọchị" na Dominican zaghachiri, sị, "Onyeisi ọrụ m kwuru na ọ bụ mmehie."
The Jesuit kwuru, "Gịnị ka ị na-ajụ ya?" The Dominican zaghachiri, sị, "M jụrụ ya ma ọ bụrụ na ọ bụ na naa na-aṅụ sịga mgbe na-ekpe ekpere." "Oh" ka Jesuit, "M jụrụ ma ọ bụrụ na ọ bụ OK na-ekpe ekpere mgbe ịṅụ sịga."
E nwere ọtụtụ ihe atụ nke anomalies dị ka onye ahụ Ka ndị nchụàjà abụọ. N'ezie, dị nnọọ nke na-akpata nke a egwuregwu nwere aha na nnyocha e mere nnyocha obodo: ajụjụ ụdị mmetụta (Kalton and Schuman 1982) . Iji hụ otú ajụjụ ụdị mmetụta nwere ike mmetụta ezigbo nnyocha ndị e mere, tụlee abụọ ndị a yiri nnọọ achọ nnyocha e mere ajụjụ:
"Olee otú ị na-ekweta na ndị na-esonụ na nkwupụta: Ndị mmadụ n'otu n'otu nwere ihe na-akpata karịa elekọta mmadụ na ọnọdụ maka mpụ na mmebi iwu ná mba a."
"Olee otú ị na-ekweta na ihe na-esonụ: Social ọnọdụ ndị ọzọ na-ata ụta karịa mmadụ maka mpụ na mmebi iwu ná mba a."
Ọ bụ ezie na ajụjụ abụọ egosi tụọ otu ihe, ha mepụtara dị iche iche na-arụpụta ezigbo nnyocha e mere nnwale (Schuman and Presser 1996) . Mgbe a jụrụ otu ụzọ, banyere 60% ​​nke ndị zaghachirinụ kọrọ na ndị mmadụ n'otu n'otu nwere ihe na-akpata mpụ, ma mgbe a jụrụ ndị ọzọ ụzọ banyere 60% ​​kọrọ na-elekọta mmadụ na ọnọdụ ndị ọzọ na-ata ụta (ọgụgụ 3.2). Ndị ọzọ okwu, ndị nta dị iche n'etiti abụọ ajụjụ nwere ike ịbara na-eme nnyocha na-a dị iche iche ọgwụgwụ.
Ọgụgụ 3.2: Results si a nnyocha e mere nnwale (Schuman and Presser 1996, Table 8.1) . Researchers nwere ike inwe dị iche iche aza dabere kpọmkwem otú ha jụrụ ajụjụ. Nke a bụ ihe atụ nke a ajụjụ ụdị mmetụta (Kalton and Schuman 1982) .
Na mgbakwunye na Ọdịdị nke ahụ ajụjụ, zaghachirinụ na-nwere ike inye dị iche iche aza dabeere na kpọmkwem okwu na-eji. Dị ka ihe atụ, iji tụọ echiche banyere ọchịchị ka mkpa, na zaghachirinụ na-agụ ndị na-esonụ ozugbo:
"Anyị na-eche ọtụtụ nsogbu ihu ná mba a, ọ dịghị nke a ga-edozi mfe ma ọ bụ inexpensively. M na-aga ga-akpọ aha ụfọdụ n'ime nsogbu ndị a, na n'ihi na onye ọ bụla ga-amasị gị ka ị na-agwa m ma ị na-eche na anyị na-okodu nke ukwuu ego na ya, kwa nta ego, ma ọ bụ banyere nri ego. "
Next, ọkara nke ndị zaghachirinụ, ajụjụ banyere "ọdịmma" na ọkara, ajụjụ banyere "ihe enyemaka maka ndị ogbenye." Ọ bụ ezie na ndị a nwere ike iyi ka abụọ dị iche iche nkebi ahịrịokwu maka otu ihe ahụ, ha kpaliri nnọọ iche pụta (ọgụgụ 3.3); America akụkọ ịbụ ihe ndị ọzọ na-akwado nke "ndị enyemaka na ndị ogbenye" ​​karịa "ọdịmma" (Smith 1987; Rasinski 1989; Huber and Paris 2013) . Mgbe e mere na-eme nnyocha atụle sụgharịa mmetụta na-anomalies, ha nwekwara ike agụkwa ha research Nchoputa. Ya bụ, anyị mụtara ihe banyere echiche ọha na eze na nke a n'ihi.
Ọgụgụ 3.3: Results si Huber and Paris (2013) . Zaghachirinụ bụ ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-akwado nke "ndị enyemaka na ndị ogbenye" ​​karịa "ọdịmma." Nke a bụ ihe atụ nke a ajụjụ sụgharịa mmetụta adịru oge azịza na-eme nnyocha na-enweta adabere na kpọmkwem nke okwu ha na-eji ha ajụjụ.
Dị ka ihe atụ ndị a banyere ajụjụ ụdị mmetụta na-ekwughachi mmetụta na-egosi, azịza na-eme nnyocha na-enweta pụrụ inwe mmetụta na aghụghọ na ụzọ dabeere na otú ha na-ajụ ha ajụjụ. Nke a apụtaghị na nnyocha ndị e mere kwesịghị iji ihe; mgbe ọ dịghị oke. Kama nke ahụ, ihe atụ ndị na-egosi na anyị kwesịrị rụọ anyị ajụjụ nlezianya na anyị ekwesịghị ịnara Ibọrọ uncritically.
Kasị concretely, nke a pụtara na ọ bụrụ na ị na-enyocha nnyocha e mere data anakọtara site na onye ọzọ, jide n'aka na ị na-agụ ahụ n'ezie ajụjụ. Na, ọ bụrụ na ị na-eke gị onwe gị ajụjụ, m nwere aro atọ. Akpa, m na-atụ aro ị na-agụ ihe banyere ajụjụ imewe (eg, Bradburn, Sudman, and Wansink (2004) ); e nwere ihe ọzọ ka ọ na-karịa m na-akọwa ebe a. Nke abụọ, m na-egosi na ị idetuo-okwu n'ihi okwu-ajụjụ si elu-edu nyocha. Ọ bụ ezie na a na-ada ka plagiarism, Iṅomi ajụjụ gbara ume ka nnyocha e mere nnyocha (dị ka ogologo oge ị nyekwa mbụ nnyocha e mere). Ọ bụrụ na ị idetuo ajụjụ si elu-edu nnyocha ndị e mere, ị pụrụ ijide n'aka na ha na e lere ule na ị pụrụ iji tụnyere Ibọrọ gị nnyocha e mere na Ibọrọ si n'ebe ọzọ nnyocha e mere. N'ikpeazụ, m atụ aro ka ị tupu-anwale gị ajụjụ ụfọdụ ndị si gị etiti bi (Presser et al. 2004) ; m ahụmahụ bụ na tupu ule mgbe niile na-ekpughe ihe ijuanya okwu.